Si fudud hadaan uhadalno, hadafka xirmada opto-elektaroonigga ah waa in la ilaaliyo sharafta qaabdhismeedka ee jawiyada aadka u daran iyadoo isla mar ahaantaana la hubinayo luminta aragga oo hooseeya. Jitai wuxuu soo saaraa xirmooyinka opto-elektarooniga ah qaabab iyo cabirro kala duwan kuwaas oo ay sii kala duwanaanayso ikhtiyaarrada naqshadeynta opto-kanal badan. Waxaan ka soo xulaynaa qaabab sameysmo iyo qaabab been abuur ah oo ku habboon baahida wax soo saarka.
Xirmooyinka korontada ayaa lagula talinayaa mashaariicda meesha kuleylka kuleylka sare uu muhiim yahay. Guud ahaan Jitai wuxuu u adeegsadaa warshad xakamaynta lambar kumbuyuutareedka (CNC milling) xarunta guryaha lagu farsameeyo. Si kastaba ha noqotee, waxaan haynaa xulashooyin kaladuwan oo kaladuwan oo noo saamaxaya inaan naqshadeyno oo soo saarno xulasho balaaran oo xirmooyinka caadooyinka ah oo ku habboon mashruuc kasta. Faa'iidooyinka baakadaha korontadu waa xulashooyinka naqshadeynta jilicsan, u soo noqoshada wax soo saarka gaaban, iyo isku halaynta sare ee jawiga adag ...
Xirmooyinka microwave waa qayb weyn oo ka mid ah waxa aan ku qabanno Jitai. Waxaan soo saarnaa xirmooyin kala duwan oo RF ah oo leh awoodo soo noqnoqod leh oo ballaaran. Xirmooyinka Jitai waxay xaqiijinayaan in shuruudaha mowjadaha sare, awooda kuleylka, iyo hermeticity ay dhamaantood ku qanacsan yihiin xalalka waxtarka leh. Waxaan leenahay tas-hiilaad si loo qorsheeyo loona soo saaro xalal si buuxda loo habeeyay dhammaan noocyada suuqyada. Jitai waaxda dajinta guriga awood u leh geeddi-socodka koronto la'aanta iyo korantada labadaba waxay awood noo siineysaa inaan ...
Jitai safafka balaaran ee xirmooyinka loogu talagalay Iskudhafka Isku-dhafan ee Isku-dhafan waxaa ka mid ah alaabada sida baakadaha iyo baakadaha dhinacyada. Guryaha dibedda waxaa lagu sameeyaa shaabbad farsamo, taas oo leh faa'iidada waxtarka wax soo saarka sare sidaas darteedna waxay ku habboon tahay wax soo saar ballaaran. Biinanka si toos ah ayaa loogala soo baxayaa salka hoose, sida caadiga ah laba-saf ama heshiis afar-saf ah, oo ku habboon rakibidda fiilada. Baakadaha khadadka laba-geesoodka ah (DIP) ama Baakadaha Quad Inline ayaa sidoo kale loogu talagalay asse plug-in asse
Xirmooyinka Aluminium ee Aluminium SHARAXA GAABAN: Faa'iidooyinka isku-darka aluminiumku waa culeyskiisa fudud, xooggiisa adag, iyo sahlanaanta lagu qaabeyn karo. Sidan oo kale waxaa si weyn loogu isticmaalaa soo saarista baakadaha elektarooniga ah. MUUQAALOOYINKA WAYN: Kala-sarreynta kuleylka ee sarreeya • Cufnaanta hooseysa • Kala-beddel wanaagsan iyo shaqeyn, gooyo silig, shiidi iyo dahabiga dahabiga ah ayaa la samayn karaa MUUQAAL KU SOO KORDHISTA BARNAAMIJKA JOOGTADA / D 10-6 / K DHAQAALAHA CARRUURTA / W · (m · K) -1 CADADKA / g · cm-3 A1 606 ...
Guud ahaan TO Xidhmooyinka, haddii kale loo yaqaan baakadaha 'Transistor Outline packages', waa dhisme laba qaybood ah; madax madaxeed iyo dabool TO. Qaybta cinwaanka waxay xaqiijineysaa in qaybaha hermetically xiran ay helaan awood halka daboolka uu sahlayo gudbinta calaamadaha indhaha. Xirmooyinka TO waxay u sameeyaan laf-dhabarka rakibidda qaybo badan oo indhaha iyo elektarooniga ah laga bilaabo wareegyada elektaroonigga ah ee aasaasiga ah illaa illaa semiconductors. Hagayaasha laga soo saaray guryaha ayaa awood u keenaya componen xiran ...
Waxaa loo dhisay inuu iska caabiyo jawiga daran, xirmooyinka wareegsan ee Jitai, haddii kale loo yaqaan isku xirayaasha hermetic, waxay leeyihiin tiro codsiyo aan xadidneyn. Laga soo bilaabo cirka ilaa badda, waxaan bixinnaa xalal caadi ah oo habeysan oo loogu talagalay caqabado badan oo isku xirnaanta ah. Waxaan ku takhasusay galaasyada iyo baakadaha dhoobada xiran ee dhoobada ah si loo hubiyo in elektaroonigga xasaasiga ah ee ku lifaaqan xirmada laga ilaaliyo astaamaha waxyeelada u leh jawiga dhulka iyo wixii ka baxsan. Jitai wado ...
Madaxa shiddadu waa inay hor istaagaan jawi qalafsan oo lagu garto culeysyo jireed sida culeyska farsamada, shoogga kuleylka, iyo gariirka halka elektaroonigga xasaasiga ah ee gudaha kujira ay wali awood u leeyihiin inay si joogto ah uga sii gudbiyaan macluumaadka elektaroniga jilicsan. Badeecadahani waxay caadi ahaan qaataan habka wax lagu xiro. Khatimidii waxaa loogu talagalay inay iska caabbiso heerarka cadaadiska sare (illaa 3000 baararka) sidaas darteedna waxay aad ugu habboon yihiin dareemayaal ay tahay inay u adkeystaan ​​bay'ad noocan ah Jitai ayaa ...
Wasakhahaasi qaabab Graphite Nadiif ah
Qaabab isku dhafan oo dhaqameed ah ayaa caadi ahaan laga sameeyaa bir. Si kastaba ha noqotee, marka laga eego sameynta caaryada iyo adeegsigooda loogu talagalay noocyada noocaas ah ayaa dhib ku qaba qaadashada qaababka isku dhafan iyo la shaqeynta qalabka isku dhafan. Tani waa natiijada isku dheelitirka isugeyn ee kuleylka ee u dhexeeya caaryada lafteeda iyo walxaha ku jira gudaha. Sidaa darteed, garaafku wuxuu u soo ifbaxay xulashada koowaad ee sameynta caaryada sababtoo ah sifooyinka la doonayo ee jirka iyo kiimikada. Jitai wuxuu iibiyaa enor ...
Jitai wuxuu soosaaraa daboollo alwaax iskuxira alxanka alwaaxa isku midka ah. Waxaan u isticmaalnaa 4J42 daawaha iyo birta birta ah ee alaabtaan kuwaas oo lala jaan qaadi karo cabbir kasta oo saldhig ah, iyadoo ku xiran shuruudaha isticmaalaha.